Maungtintyin: ကျေးဇူးပြု၍ အပေးအယူလုပ်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားပါ
သင်ဟာ ပုံမှန်ထက်ပိုတဲ့မိုင်ကို မသွားနိုင်တော့လျင် အပေးအယူလုပ်ပါ။ အပေးအယူလုပ်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့တန်ဖိုး များကိုတော့ အပေးအယူမလုပ်ပါနဲ့။
ဘ၀ဟာ နုုးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ခရီးတစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ဒါက မဖြစ်သင့်ပါ။ သွားချည်ပြန်ချည် စုန်ချည်ဆန်ချည် ကောင်းတစ်ခါ ဆိုးတစ်လှည့်ဖြင့် အဲဒါကို ဈေးကွက်တင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြရပါတယ်။ လူတွေနဲ့ အခြေအနေတွေဟာ ဘ၀ရဲ့အိမ်ဦးနှင့်ကြမ်းပြင် ပြေးသွားလှုပ်ရှား နေရပါတယ်။ အချို့က ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရတာ လွယ်ကူပေမယ့် အခြားတစ်ခုကတော့ ပတ်သက်ဆက်ဆံရတာ ကြေးထူ၍ ကျပ်တည်းခက်ခဲပါတယ်။
အဲဒါက- ယုတ်စွအဆုံး ခုခံတော်လှန်မှုများနှင့်- အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဲဒါတွေကို ပြေပြစ်စွာ ဘယ်လို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရမယ် ဆိုတာနှင့်ပတ်သက်တဲ့ စွမ်းရည်ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့- အကျွန်ုပ်တို့ထံ အမြဲတမ်းလာတဲ့ ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သဘောထားကွဲလွဲမှု ပဋိပက္ခဟာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုကိုပါ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တဲ့အရာကို အမြဲတမ်းမရနိုင်ပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ လိုချင်တဲ့အရာအတွက် ရရှိရန် ရှာဖွေဖို့ မသင့်တော်ပါလို့ ဒါက ဆိုလိုပါသလား?
သဘောမတူမှုဟာ- သဘောတူဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒဆိုင်ရာ ချို့တဲ့ကင်းမဲ့ရလောက်အောင် အာသာဆန္ဒ များစွာမရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့်- ဖြစ်ပွားရပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခိုင်မာစွာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ တွန့်ဆုတ်ခြင်းက- တစ်စုံတစ်ခုကို သဘောမတူဖို့- (ဒါမှမဟုတ်) အကောင်းတစ်ဝက်ဖြစ်တဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့် သဘောမတူဖို့- ကျွန်ုပ်တို့ကို နေရာချထားပေးပါတယ်။ အကောင်း တစ်ဝက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုတဲ့အခါ- အဆိုးတစ်ဝက်ကိုလည်း ကျွနု်ပ်တို့က ကြိုတင်ကောက်ချက်ချထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းတစ်ဝက် အဆိုးတစ်ဝက်အကြား ဒီပဋိပက္ခဟာ- လူအများနှင့်ပတ်သက်လို့ အဖြေရှာခြင်း တစ်ခုကို ဆိုက်ရောက်လာဖို့- ပြီးတော့ သူတို့ဘာသာသူတို့အထဲမှာ ယခင်အတိတ်ကာလ အဖြေရှာခြင်း မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေများသို့ ဆိုက်ရောက်လာဖို့- အကျွန်ုပ်တို့ကို ဆွဲထားပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်မှ ခြားနားတဲ့- နေရာ+အချိန်နှစ်ခုလုံးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ မူမမှန်မူများနှင့် တိုက်မိ ခတ်မိတဲ့- လူအများ, အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ- အကျွန်ုပ်တို့ဟာ မျှတတဲ့ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျတဲ့ အမြင်မှန်ရခြင်း နားလည်မှု အလင်းရောင်မှာ- အဲဒါတွေကို စွဲမက်သွားပါတော့တယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ကျကျတွေးနေခြင်းက အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်မှုကို ဖြစ်လာဖွယ်ရှိပါတယ်။ အခြားသူများအတွက် ရှင်းလင်းမြင်သာတဲ့အရာ အကျိုးဆက်တစ်ခုလို ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဲဒီလို မဟုတ်ပါ။
အနေအထားနှင့်ပတ်သက်လို့ ပေးအပ်လိုက်ရခြင်းက- အရှုံးပေးလက်မြှောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ လက်သင့်ခံခြင်းမဟုတ်သလို- သည်းညည်းခံ လက်နက်ချခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ ဒါက ရှက်ဖို့ရာ တစ်စုံ တစ်ခုမဟုတ်သလို ဖိစီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ စိတ်ကို ခံစားနေရတာ မဟုတ်ပါ။
တကယ်တမ်းကတော့ ဒါက အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လမ်းများမှာ- သဘောတူမှုဆီရောက်လာနေတဲ့- ego ရဲ့ ကြီးကျယ်ချဲ့ကားတဲ့ အသိကို- ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းမှာ ရဲရင့်တဲ့ကြိုးစားမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက သိစိတ်က ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာပါ။ ဤသို့သော နည်းလမ်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်လက်ခံခြင်းက- အခြားသူများရဲ့ အမြင်များကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ အကျွန်ုပ်တို့အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ - ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မကောင်းတာရဲ့ အရိပ်လက္ခဏာတစ်ခုကို မှန်းဆထင်ရတဲ့ အခါမှသာလျင်- အကျွန်ုပ်တို့က အခြားသူများရဲ့ ကိစ္စမှာ ကောင်းတာအတွက် မျော်လင့်စောင့်စားခြင်းကို စတင်နိုင်ပါတယ်။ အမှန်တရားအတွက် အပြည့် အ၀တော့မဟုတ်ပါ။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အမှားမှား အယွင်းယွင်း တလွဲတချော် အရိပ်ကို လိုက်လံဖမ်းဆီးကြပါတယ်။ စိတ်ကူးများကို မျက်စိမှောက် မမိဖြစ်နေ ကြပါတယ်။ လွတ်နေပါတယ်။ ခုခံတော်လှန်မှု အတိုက်အခံလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားဖို့ အပေးအယူလုပ်ခြင်းဟာ သဘာဝအဖြစ်သနစ်များရဲ့ မွေးရာပါ ပင်ကိုယ်မူလ ဖြစ်ပါတယ်။
ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့လေဟာ အဝေးသို့ တိုက်ခတ်ဖို့ အရိပ်လက္ခဏာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါ- ပြီးတော့ သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာလာတဲ့ အရာအားလုံးကို (အင်းအားကြီးမားတဲ့ သစ်ပင်များကိုတောင်) အမြစ်ဖြုတ်သွားတဲ့အခါ- အကယ်၍ မြဲမြဲမြံမြံခိုင်မာစွာ ရပ်တည်နေ ခြင်းမဟုတ်ခဲ့လျင်- ယိမ်းထိုး လှုပ်ယမ်းဖို့- ညွတ်ကိုင်းတိမ်းစောင်းဖို့- ကွေးခွင်ညွှတ်ကျသွားဖို့- စတင်ပါတယ်။ လေရဲ့ အမျက်သည်းခြင်း ဟာ မကြာပါ။ ဒါပေမယ့် သစ်ပင်ရဲ့ နှိမ်ချကျိုး နွံသွားတဲ့ ညွှတ်ကိုင်းခြင်းဟာ- လှိုင်းလေထန်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အကွက်အစပ်အဖာမှ တစ်ဆင့်- အဲဒါကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ရေစီးကြောင်းက လျော့ပါးသွားလို့ မြက်ရဲ့ဦးခေါင်း ပေါ်လာတော့မှပဲ- ရေရဲ့လျင်မြန်တဲ့စီးကြောင်းကို ရင်ဆိုင်လျက် ဆန်လျက်- မြက်ရဲ့ ရွက်ချွန်းသွားကိုယ်တိုင် ပြားချပ်သွားတယ် - ဆိုတာ သိရှိရပါတယ်။ အသက်ရှင်သန်မှုအတွက် သဘာဝက ဒီကာကွယ်မှုယန္တရားကို အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါကလည်းပဲ အခြားသူများနှင့် ညီညီညွတ်ညွတ် နေထိုင်ဖို့- ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေထိုင်ဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ကို သင်ကြားပေးပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခ- စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ၀ရုန်းသုန်းကား အခြေအနေ- လူလူချင်းဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ ထိပ်တိုက်ဖြစ်မှုနှင့် စုပေါင်းစစ်ပွဲများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချိန်အခါများမှာ- ညီညွတ်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရရှိဖို့ အကျိုးသက်ရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်- အပေးအယူလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ရွေးစရာတစ်ခု အနေနှင့် သဘာဝတရားက အကျွန်ုပ်တို့ကို စီစဉ်ပေးပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အတွေးအခေါ်အိုင်ဒီယာကို နိုးထဖို့ လိုအပ်သည်သာလျင်။ ပြီးတော့ အတွင်းအပြင် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရရှိဖို့ လုပ်ဆောင်စိုးမိုးမှု ထဲ အဲဒါကို သယ်ဆောင်လာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ဧကန်ဧက ကြီးမားတဲ့ဈေးနှုန်းတော့ မဟုတ်ပါ။ တကယ်တမ်းမှာတော့ ဒါက အပေးအယူ လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျတဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်ချင့်တွက်ရာမှာ- လှိုက်လှဲပျူငှါစွာ လက်ခံကြိုဆိုစရာ တန်ဖိုး- နောက်တိုး ဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ ဘာကို စောင့်မျှော်နေကြတာပါလဲ?
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Wednesday, October 12, 2011